Ikhaya » Izindaba Zamuva » Izindaba Ezintsha » I-USA Izindaba Ezintsha » Ukuguquka kwesimo sezulu kuyingozi ekusimeni kwezezimali e-US
Izindaba Ezintsha • Izindaba Ezintsha Zokuhamba • Ukuhamba Ngebhizinisi • Izindaba zikaHulumeni • Izindaba • Abantu • Unomthwalo wemfanelo • Ukusimama Izindaba • Ubuchwepheshe • Ezokuvakasha • Izindaba Zocingo Lokuhamba • ezithrendayo Manje • I-USA Izindaba Ezintsha
Ukuguquka kwesimo sezulu kuyingozi ekusimeni kwezezimali e-US.
UMkhandlu Obhekele Ukuzinza Kwezezimali ukhomba ukuguquka kwesimo sezulu njengobungozi obuvelayo futhi obukhulayo ekuzinzeni kwezezimali e-United States.
UMkhandlu Obhekele Ukuzinza Kwezezimali ukhipha umbiko nezincomo ngobungozi bezezimali obuhlobene nesimo sezulu.
Ukuguquka kwesimo sezulu kuyingozi evelayo futhi ekhulayo ohlelweni lwezezimali lwaseMelika oludinga ukwenziwa.
Umbiko nezincomo ze-FSOC zimelela isinyathelo sokuqala esibalulekile ekwenzeni uhlelo lwethu lwezezimali lukwazi ukumelana nosongo lokuguquka kwesimo sezulu.
UMkhandlu Obhekele Ukuzinza Kwezezimali (FSOC) ukhiphe umbiko omusha uphendula i-Executive Order 14030 kaMongameli Biden, iRisk-related Financial Risk. Ngokokuqala ngqa, i-FSOC ikhombe ukuguquka kwesimo sezulu njengobungozi obuvelayo nobukhulayo ekuzinzeni kwezezimali e-US.
Umbiko nezincomo ezihambisana nawo kukhombisa ukuzibophezela kwe-FSOC ekwakheni nasheshiseni imizamo ekhona ukushintsha kwesimo sezulu ngokusebenzisa izincomo eziphathekayo zama-ejensi angamalungu:
Ukuhlola ubungozi bezezimali obuhlobene nesimo sezulu ekuzinzeni kwezezimali, kufaka phakathi ngokuhlaziywa kwesimo, futhi kuhlolwe isidingo semithethonqubo emisha noma ebukeziwe noma ukuholwa kokuqondisa ukuphendula ngezingozi zezimali ezihlobene nesimo sezulu;
Thuthukisa ukudalulwa okuhlobene nesimo sezulu ukunikeza abatshali zimali nababambiqhaza bemakethe ulwazi abaludingayo ukuze benze izinqumo ezinolwazi, ezizosiza nabalawuli nezikhungo zezezimali ukuhlola nokuphatha izingozi ezihlobene nesimo sezulu;
Thuthukisa idatha ehlobene nesimo sezulu evumela ukulinganiswa okungcono kwezingcuphe ngabalawuli kanye nasemkhakheni wangasese; futhi
Yakha amandla nobungcweti ukuqinisekisa ukuthi ubungozi bezezimali obuhlobene nesimo sezulu buyakhonjwa futhi bulawulwe.
"Ukushintsha kwesimo sezulu usongo olukhulayo nolwandayo ohlelweni lwezezimali lwaseMelika oludinga ukwenziwa, ” UNobhala Wezezimali uJanet L. Yellen kusho. “Umbiko nezincomo ze-FSOC zimelela isinyathelo sokuqala esibalulekile ekwenzeni uhlelo lwethu lwezezimali lukwazi ukumelana nosongo lokuguquka kwesimo sezulu. Lezi zinyathelo zizosekela umzamo ophethwe nguhulumeni ophathelene nokuguquka kwesimo sezulu futhi zisize uhlelo lwezezimali ukuthi lusekele uguquko oluhlelekile, lomnotho lubheke enhlosweni yokukhishwa kwezinga eliphansi. ”
Tel Aviv, Naples, Odessa, Kyiv, Dubai kanye ne-Amsterdam...